Khin Maung Chin: 2011
06 October 2011 4:58 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ 15 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
02 October 2011 2:02 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ 12 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
01 October 2011 4:37 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကြေငြာချက်4ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
30 September 2011 10:49 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ @ကျနော်KMCအရမ်းညံ့ပါသည်@ ပေါ့..:D
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ9ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
26 September 2011 10:21 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒါနဲ့စိတ်ထဲကလည်းလွမ်းသလိုလိုရှိနေတာနဲ့အဆိုတော် ဟဲလျဲနဲဘွက်ရ်ှလဲယ် (Helene Bøksle) ဆိုထားတဲ့
Mitt Land (My Land) ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။တဆက်ထဲရိုးရိုးအေးအေးလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ5ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
18 September 2011 11:06 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ခေါင်းစဉ်ပေးထားသလိုပဲ ဒီနေရာလေးမှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဧရာဝတီအကြောင်းလေးကိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြသွားမှာပါ။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ PDF7ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
17 September 2011 7:24 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
သွားအောင်(စိတ်နဲ့ဖြစ်စေ၊နှုတ်နဲ့ဖြစ်စေ၊လက်နဲ့ဖြစ်စေ၊နက် "Net" နဲ့ဖြစ်စေ)ဝိုင်းဝန်းတားဆီး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ သဘာဝဘေးမှတ်တမ်းများ 11 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
11 September 2011 2:12 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ရေးပါလှတဲ့မေးခွန်းတစ်ဖြစ်လဲအနှီပို့စ်ကြီးကိုရေးဖို့လက်တောင်တွန့်မိကြောင်းပါခင်ဗျာ။ Thank you ပါ။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ 24 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
10 September 2011 1:46 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
အချိန်သိပ်မရလောက်အောင် Busy နေတယ်ဆိုတာပါပဲဗျာ။ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်..
ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ..ဘာရေးရမှန်းမသိနိုင်လို့နောက်နေ့(မနက်ဖြန် OR သန်ဘက်ခါ)မှပဲရေးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
လောလောဆယ်တော့အမေစုနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု AlJazeera ရုပ်မြင်သံကြားကတင်ဆက်ထားတာ
ကို YouTube မှာတွေ့လို့ပြန်လည်မယူလာပါတယ်...။ဘလော့ထဲမှာအမှတ်တရထားချင်လို့ပါ..။
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ကျနော် KMC ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါ7ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
27 July 2011 5:48 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
နောက်ကျနေတယ်လို့ပြောလည်းခံရမှာပါပဲဗျာ..ပထမတော့မတင်မလို့နေနေပြီးမှ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုယ့်ဘလော့ပေါ်မှာရှိနေစေချင်တာနဲ့တင်လိုက်တာပါ..။ အားလုံးလည်းသိပြီးကြားပြီးကြပြီဆိုတာယုံပါတယ်...မြို့ထဲသွားတော့လူအုပ်ကြီး
လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့လို့ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးကိုယ်ပါဝင်ရောလိုက်တယ်။ ရောတယ်ဆိုတာထက်စိတ်ထဲကလည်းတကယ်ကိုမကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ..ကျနော်တို့ ထရောင်ဟိုင်းမ်မြို့မှာတော့လမ်းလျှောက်စီတန်းနေတဲ့လူအုပ်ဟာခြောက်သောင်း ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါ3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
26 July 2011 7:58 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီလိုပါပဲ..တစ်ခါတလေတော့လည်းဘယ်သူ့ကိုမှဖွင့်ပြောလို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ခုလိုမျိုးလေးနဲ့ဖွင့်ချလိုက်ရပါတယ်..။တခါတလေလို့လှအောင်ပြောနေပေမယ့်တကယ်တော့ အမြဲတမ်းပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုံပြင်တစ်ပုဒ်စီရှိကြစတမ်းဆိုရင်ကျနော့်မှာလည်းပုံပြင်တစ်ပုဒ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်..။သေချာတာကတော့အဲဒီပုံပြင်တွေဟာအတိုအရှည်မတူနိုင်ပါဘူးနိဒါန်းနိဂုံးမတူ
24 July 2011 2:06 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
သူတို့မသိတာက အဲဒီပန်းသီးနဲ့ကလေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပေါ့..။
16 July 2011 12:44 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ PDF3ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
13 July 2011 12:14 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော့်နဂိုပါရမီအထုံနည်းလို့၊ကျနော်ညံ့ဖျင်းလို့ခုလိုရသမပြည့်စုံတဲ့စာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ထွက်လာတဲ့ဒီစာစုလေးတစ်ပုဒ်ကို အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျေးဇူးတင် စကားလေးကိုဒီနေရာကနေပြောလိုက်ပါတယ်....
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းရှည်2ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
12 July 2011 5:04 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို 1 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
10 July 2011 1:01 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းရှည် 1 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
07 July 2011 5:40 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ပြောပြောဆိုဆိုပွလန်ကျဲနေသောနေမိုးအောင်ကစားသည့်အရုပ်ကလေးများကိုလိုက်လံသိမ်း ဆည်းနေရင်းမှအိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ရာအိပ်ယာပေါ်တွင်ရှိမနေသော အစ်ကိုကြီးကြောင့်သောက်လာသောအရက်များ၏အာနိသင်ပင်ပျောက်ကွယ်သွားလု
05 July 2011 10:03 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
03 July 2011 10:10 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
02 July 2011 6:05 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
သူတို့ကတော့အမှိုက်တွေပဲ....။ @ ဝုန်း @
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ7ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
30 June 2011 11:49 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
မိုးတွေအုံ့မှိုင်းနေပြီး စိတ်တွေကိုထိုင်းစေတဲ့အနေအထားနဲ့ဒီနေ့အိပ်ယာကထမိတယ်..။ သွားစရာကလည်းအရေးတကြီးဘာမှမရှိတာနဲ့အိပ်ယာပေါ်မှာလူးလိမ့်ရင်း မေ့ဖျောက်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုခုကဖြက်ကနဲခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့တယ်ဗျာ..။ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် ခုချိန်ထိလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လိုပဲခံစားရတုန်းလို့ပြောရင် ပျော့ညံ့တဲ့သူလို့ထင်ကြလေမလား..။
အဲဒီအတွေးတွေနဲ့လုံးထွေးနေရင်းက အနားမှာရှိတဲ့စာရေးစားပွဲပေါ်ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သွားခဲ့ပါ တော့တယ်ဗျာ..။ဒီလိုနဲ့ သိပ်အရုပ်မဆိုးတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ..။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..။:P
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ2ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
29 June 2011 5:46 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
တစ်ဝိုင်းလုံးထပြန်ကြလေရာ အုပ်ထိန်းသူဟုထင်ရသောမိန်းမကြိးတစ်ဥိးက ငွေနှစ်ရာတန်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ကာအနားရှိစားပွဲထိုး
ကို ဘောက်ဆူးသဘောမျိုးဖြင့်ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုသို့ငွေနှစ်ရာကိုပေးလိုက်သည်ကိုသာမြင်လိုက်ရသော(စားသောက်ခငွေရှင်း
28 June 2011 5:59 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော်စာတွေရေးတာကျဲနေတယ်နော်.. အဖတ်ကိုပဲလျှော့လို့မရလို့ပါ..... အွန်လိုင်းကဒေါင်းထားတဲ့ဝတ္ထုတွေမှအများကြီးဖတ်ဖို့ကျန်နေသေးတယ်လေ..ဟီးဟီးး
ဒီလိုနဲ့ပဲအင်တာနက်ဂျာနယ်ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းဂျာနယ်ကိုမျက်စေ့လည်ပြီးရောက်သွားရောဗျာ.. ဟိုဟာဒီဟာလျှောက်ဖတ်နေရင်းကပဲ ကွန်ပြူတာအသုံးများတဲ့သူတွေမျက်စေ့ကိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ
ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးကိုသွားတွေ့လို့ဖတ်လိုက်မိရင်းက တကယ်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေးမှန်းသိလိုက်ရလို့ ကျနော့်မှတ်စုလေးထဲကို သိမ်းထားလိုက်မိပါတယ်.။
25 June 2011 11:56 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့...နေ့တိုင်း Blog ကို Update မလုပ်နိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ.
ဒီတော့ ''လွှတ်ချခံရသောမေတ္တာ ၂'' တုန်းကနေသွေးနိုင်က အစ်ကိုကြိးနေမိုးနိုင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး
ဦးလေးနဲ့အဒေါ်ကိုကျောခိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်နော်.. အိုကေ...ခုပြန်ဆက်မယ်ဗျာ..။ အားပေးကြပါဥိးလို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ...။ ကျေးဇူးတင်၏ပေါ့..:P
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းရှည်5ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
22 June 2011 7:04 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒါနဲ့ကျနော့်ဆရာ(ဖတ်ဆရာနော်)လေးတွေကိုသတိရလို့ ကျနော့်လိုပဲအူတူတူအတတ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဆရာလေးတွေကိုမျှဝေဖို့စိတ်ကူးမိပါတယ်..
21 June 2011 1:28 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
စိတ်ထဲငြီးစီစီဖြစ်နေတာနဲ့ရေးလက်စဇာတ်လမ်းရှည်လေးကိုဘေးခဏချထားပြီး ပြုံးချင်ရယ်ချင်လွန်းနေတာနဲ့ဒီဟာသပို့စ်လေးကိုကောက်ရေးလိုက်တယ်ဗျာ..။ ဒါရိုက်တာဧရာရဲ့အဖေလွန်လား၊သားလွန်လားဆိုတဲ့ Short Plot လေးကိုမှီငြမ်းထားတာပါ..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဟာသ5ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
9:34 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
လှမ်းကြည့်ရင်းမင်းခိုက်စိုးစံ (လို့တော့ထင်တယ်သေချာတော့မမှတ်မိတော့ပါ) ရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ကဗျာလေးကိုခုလောလောဆယ်တိုက်ဆိုင်နေတာလေးတွေနဲ့ထပ်ဟပ်ခံစားမိလို့
19 June 2011 2:20 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
07 June 2011 12:15 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ရေးစရာတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် မျက်လုံးမကောင်းတာရယ်၊ အိမ်အလုပ်၊ အပြင်အလုပ်တွေနဲ့လုံးထွေးနေရတာတွေရယ်ကြောင့်စိတ်ပဲရှိပြီးလူကမလိုက်နိုင်ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ.
နားချိန်နည်းနည်းလျှော့ပြီး ကြိုးစားနေဖြစ်ပါတယ်.. ရှေ့လျှောက်ပိုပြီးလက်ခံအားပေးလာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်..။ စကားမဆက်ဒီနေ့အဆင်ပြေတုန်းကျနော်ဇာတ်လမ်းရှည်တစ်ပုဒ်လောက်အစပျိုးရေးလိုက်ပါပြီဗျာ.။ လေးငါးပိုင်းလောက်တော့ခွဲရေးရမယ်ထင်ပါရဲ့..။
မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်နဲ့ဖတ်ကောင်းအောင်ရေးပါ့မယ်လို့ အလေးအနက်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ.. အားပေးဖတ်ရှု့ကြည့်ကြပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း.။
06 June 2011 7:05 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဖိတ်မခေါ်ပဲရောက်လာခဲ့သူတစ်ယောက် မောင်းမထုတ်ပဲထွက်ပြေးသွားတာကြောင့် ရင်မှာမချိအောင်ခံစားနေရလို့ ကဗျာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဘလော့ပေါ်တင် ဝေမျှပေးလိုက်ရတာပါ..။ ဘာမှမဆိုင်ပေမယ့် ပိုင်လည်းမပိုင်ချင်ခဲ့ပါဘူးလေ... ဟောဒီရင်ဘတ်ထဲမှာဒဏ်ရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ခေတ်တခေတ်ကိုလွယ်ထမ်းထားရင်း ရှေ့ခရီးကိုအဖော်မပါပဲ သွားရဦးမှာပေါ့......။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4:29 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
တချက်ရယ်လိုက်ရင် တစ်ရက်အသက်ပိုရှည်တာလား ! တစ်ရက်မှာဆယ်ခါပြည့်အောင်ရယ်မောလိုက်ရင် တစ်ရက်အသက်ပိုရှည်တာလား ! ဆိုတာသေချာမရေရာပေမယ့် ရယ်မောခြင်းဆိုတာလူနဲ့ သဟဇာတဖြစ်စေပြီး စိတ်ကိုပေါ့ပါးရွှင်လန်းစေတယ်၊ သောကတွေကို မေ့ဖျောက်နိုင်စွမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ သေချာရေရာတယ်ဆိုတာအားလုံးလက်ခံကြမှာပါ..။ ဒါကြောင့်လည်းကျနော်အားတုန်းက လိုက်ဖတ်ထားမိတဲ့ ရယ်မောဖွယ်ရာ ဟာသလေးများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်တာပါ..။ ဖတ်မိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေခေတ္တခဏ သောကအပူတွေပြေပျောက်ပြီး ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒလေးလည်းပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဟာသ0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
04 June 2011 7:55 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
အောင်မာသူတို့ကြောက်ရှာမှာပေါ့လို့တွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကမကြောက်ရှာဘူးပေါ့လို့ မေးလာရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်လည်းကြောက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထွက်ပြေးလို့မရအောင်
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ 1 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
03 June 2011 11:19 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
နေ့ခင်းကအသည်းမကောင်းတဲ့ကျနော် Trondheim မြို့က st.Olavs ဆေးရုံကြီးမှာပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့အတွက် ရောက်သွားခဲ့တယ်ဗျာ.. အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်.။ အမှန်ပြောရရင်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ နေရထိုင်ရတာမကောင်းသလိုလိုဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကြားဖြတ် appoiment လုပ်ပြီးသွားစစ်ဆေးလိုက်တာပါ..။စိတ်ကထင်နေလို့လားတော့မသိပါဘူး..။ ခုတော့လည်းလုံးဝအကောင်းကြီးပါပဲလေ.. ဒီလိုပါပဲ..ဒါကြောင့်လည်းလူကြီးသူမတွေက ''ကျန်းမာခြင်းသည်လာဘ်တစ်ပါး'' လို့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာကိုးး. လေရှည်နေတာနဲ့ပဲဒီနေ့ပြီးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး..။ :P ဒါနဲ့ပဲသတိရလို့ကျနော့်ဘလော့လေးကိုလည်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပဲဓာတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး ဆေးစစ်လိုက်တော့တာပေါ့..။ အဖြေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ၊ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူငယ်ချင်းတို့ရယ်...... တိန်.....
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကြေငြာချက်2ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
8:55 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ အောင်မျိုးနဲ့ ဟန်လင်းကိုသွားခေါ်ပြီး Game City ကိုသွားကမြင်းပစ်လိုက်ဦးမယ်....
02 June 2011 1:22 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
၂၉-၀၅-၂၀၁၁ နေ့ညကအိပ်ယာဝင်ဖို့လုပ်နေရင်း ရုတ်တရက်ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်နဲ့ဟိုးတောင်ဖက် အစွန်ဆုံးပိုင်းမှာနေတဲ့ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကဖုံးဆက်ပြီး ဟိုကနေသူထွက်လာနေပြီ၊ မနက်ရောက်လာမယ်..ပြီးရင်သူနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပြီးဝိုင်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို့အဆင်သင့်လုပ်ထားပါလို့ ပြောလာတာနဲ့ ခေါင်းညိတ်လိုက်ရတယ်လေ...။ ဒါနဲ့ပဲမနက်ကျတော့ညီတော်မောင်ရောက်လာပါလေရော.. ကျနော်နေတဲ့မြို့ကတချို့သူသိတဲ့သူတွေကိုပါလိုက်နှုတ်ဆက်ရင်းကနေ အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်မိတော့ သူ့ယောက္ခမဆုံးတာနှစ်နှစ်ပြည့်အလှူလေးလုပ်ချင်လို့ပါတဲ့..။ သကောင့်သားကကြိုပြီးတော့လည်းမပြော၊ လိုက်မသွားပေးလို့ကလဲမဖြစ်ဆိုတော့ရရာအိတ်လေးတစ်လုံးထဲမှာ အဝတ်အစားလေးနှစ်စုံလောက်ထည့်ခဲ့ပြီး သူ့ကားပေါ်ကိုပစ်တင်ထားလိုက်တာပေါ့..။ အလှူအိမ်ကူညီဖို့သွားရမှာဆိုတော့လည်း လပ်တော့ကြီးတစ်ကားကားနဲ့မသင့်တော်ဘူးလေ..ဒါကြောင့် နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အတွက်တော့ လပ်တော့လေးထားခဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ..။ အမလေးးး ကျနော်ကထင်တာကနှစ်ရက် သို့မဟုတ် သုံးရက်ဆိုကျနော်ပြန်လာနိုင်ပြီပေါ့..။ (တခြားနိုင်ငံကသူငယ်ချင်းများအပါအဝင်) သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက မပြန်ပါနဲ့ဦး..ရောက်တုန်းသူတို့မြို့လေးကိုလိုက်လည်ပါဦးဆိုပြီး ဟိုကခေါ်လိုက်၊ဒီကဆွဲလိုက်နဲ့..နောက်ဆုံးတော့စုစုပေါင်း မြို့လေးမြို့မှာတစ်ရက်ဆီလိုက်လည်ပြီး ဒီမနက်မှညီတော်မောင်နေတဲ့အိမ်ကနေ ကျနော့်နေရာကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ...။ ဒါတောင်တစ်ချို့လူတွေကိုမနည်းတောင်းပန်ခဲ့ရသေးတယ်လေ....။ :P သူငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ကျနော့်မှာသူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များပါလားလို့မတွက်လိုက်နဲ့နော်... ။ ဟီးး ဒီတစ်နိုင်ငံလုံးမှာမြန်မာပြည်သားကျနော့်သူငယ်ချင်းဆိုလို့ ဆယ်ယောက်တောင်မပြည့်ပါဘူးဗျာ..။ သူတို့ကွန်ပြူတာတွေကိုလည်းယူသုံးရမှာအားနာတာနဲ့၊နောက်ပြီးအချိန်သိပ်မရတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ဘလော့လေးကိုခုမှဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ..။ စာတွေမရေးနိုင်ခဲ့တာရယ်၊ဘလော့သူငယ်ချင်းတွေရယ်ကို အကျိုးလေးအကြောင်းလေးတောင်မပြောပြပဲ ဘလိုင်းကြီးပျောက်သွားရပုံလေးကိုရှင်းပြပြီးတောင်းပန်ချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါ..။ သူငယ်ချင်းအားလုံးနားလည်ပေးကြပြီး ခွင့်လွှတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ.။
12:53 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ PDF0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
12:45 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဘာရေးရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင်းမဝင်ဖြစ်တာသုံးလေးရက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဖေ့စ်ဘွက်ကို ဝင်လိုက်တော့ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့စာမျက်နာလေးပေါ်က Note လေးတစ်ခုကိုဖတ်မိလိုက်လို့ ကျနော်သဘောကျလွန်းတာရယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသဘောကျစေချင်မိတာရယ်ကြောင့် By ... Than Htike Aung ဆိုပြီးရေးသားတင်ပြထားတဲ့ Note လေးကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.. ဖတ်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြုံးမိတယ်ဆိုရင်တောင်အမြတ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ...
25 May 2011 7:52 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ PDF6ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
11:51 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
23 May 2011 11:16 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီနေ့တော့ရေးလက်စဇာတ်လမ်းရှည်လေးကိုလက်စသတ်ပြီးသွားပါပြီ.. ဒါပေမယ့်မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးကူညီမှု့ကြောင့်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ဗျာ.. ဟီဟိ ဘာလိုလိုနဲ့ကျနော့်ဘလော့လေးတောင် နှစ်လပြည့်ခဲ့ပြီလေ..အဲဒါအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင် အမြဲတမ်းစာတွေလာလာဖတ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီနေ့ရေးပြီးကာစဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို မတင်ပေးတော့ပဲ ကော်ဖီပဲတိုက်မလားလို့စဉ်းစားမိလို့ပါ.. ကြိမ်ဆဲကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်နော်.:P ပိုက်ပိုက်လဲမပေးပါနဲ့.. သူငယ်ချင်းတို့မှာရှိတဲ့ Credit Card လဲမလိုပါဘူးဗျာ.. ကျနော်ဒါနလုပ်တာမို့ကြိုက်သလောက်သာသောက်သွားပါတော့လို့..:P:P:P လေရှည်နေတာနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး..ဒီတော့ ဟောဒီမှာပါ ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သောက်သွားကြပြီးနီးစပ် ရာသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဥိးလို့ ညာတာပါတေးအခွင့်အရေးတောင်းယူလိုက်ပါရစေ..။
20 May 2011 6:57 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
'' အိုခေနွယ်..မငိုပါနဲ့နော်.. ကိုယ်သွားတော့မယ်..နွယ်ဟာနွယ့်မောင်လေးအတွက် အချစ်ကိုစတေးလိုက်ရတာပဲလေ.. ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နွယ်.. ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါနွယ်.ကိုယ်သွားပြီ.'' ဆိုပြီးလာရာလမ်းအတိုင်း...........................
♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦
19 May 2011 4:02 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
အဲဒီလက္ခဏာအရ မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့စေ့စပ်လို့လည်းမရဘူး၊လက်ထပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတာ ငါသိထားတယ်သီဟ.'' လို့ ကျနော့်မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတစ်လုံးချင်းပြောလိုက်ပါလေရောဗျာ.. ပျော်ပါးစွာအော်ဟစ်နေကြတဲ့ အသံတွေအားလုံးငြိမ်သွားတယ်လို့တောင်ကျနော်
သူ့စကားကိုကြားပြီး ထင်လိုက်မိတယ်လေ... ချက်ချင်းသတိဝင်လာပြိး စတတ်နောက်တတ်တဲ့ကျနော့်ဗီဇအတိုင်း .............
18 May 2011 5:13 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
'' အဲလိုအထူးတန်းပွဲကြည့်စဉ်ဖက်ရောက်လာတော့မှ ကျနော်က (ထိုင်ရအောင်နွယ်ရယ်) ဆိုပြီးကျနော်ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ..။ ဟားဟားဟား..သူကတော့ဘာမှမသိပါဘူး။
အဲဒီကျနော်တို့ထိုင်နေတဲ့ခုံတွေရဲ့အပေါ်ဖက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာကြိုတင်နေရာယူထားကြတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေက မြက်ခင်းတွေကို ဖြန်းတဲ့ရေပန်းပိုက်တွေနဲ့အဆင်သင့်ဆိုတာ
17 May 2011 2:09 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဖုံးထဲကနေ ရော်ကီလေးကို နမ်းနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးကျနော်ရယ်ချင်လိုက်တာဗျာ..
သူပြောနေတဲ့ ရော်ကီဆိုတာကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်.. ဟိုကဘာပြန်ပြောလဲတော့ကျနော်မကြားရလို့မသိပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ကလေးသူခိုးမလေး ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ရတာတော်တော်တော့ချစ်မယ့်ပုံမျိုး....ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ပြီးစာဖတ်နေတဲ့ဟာ သူ့ကိုကြည့်ပြီးရယ်ချင်လာတာနဲ့ဖတ်လက်စစာအုပ်ကိုဘေးချထားလိုက်မိတော့တယ်..
ခဏကြာတော့မှ ပြောလို့ပြီးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဖုံးကိုပြန်ချလိုက်ပြီး .............
16 May 2011 1:29 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော့်ကိုမြင်နေတဲ့မမတို့အားလုံးကို ''ရှူး တိုးတိုး'' ဆိုတဲ့အမူအယာလုပ်ပြလိုက်တော့ သူတို့က ကျနော်ကောင်မလေးကို နောက်ချင်လို့တမင်လုပ်ပြတယ်ထင်လိုက်သေးတယ်...... အရေးထဲ...
ကောင်မလေးကတော့ဘာမှမသိရှာဘူးပေါ့... စားလို့ကောင်းနေတုန်းလေ... အသာလေးအနားကပ်ပြီးနောက်ကနေပါးစပ်ကိုပိတ်၊ လက်ကိုနောက်ပြန်ချုပ်လိုက်တော့ ကောင်မလေးကလန့်ပြီးရုန်းတော့တာပေ့ါ..
15 May 2011 1:25 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော်တို့အိမ်အဝင်တံခါးနားမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့စာလေးတစ်ကြောင်းရှိတယ်ဗျ.. အဲဒါကတော့
''စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်များကိုဤနေရာမှာထားရစ်ခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာကြွရောက်ပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါ၏'' တဲ့.. သဘောကတော့ဗျာ..အိမ်သားဖြစ်စေ၊အပြင်လာလည်သူဖြစ်စေ ကျနော်တို့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပူပင်သောကတွေပျောက်ပြီးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားအောင်လို့ပါ..
(ဒီဇာတ်လေးလေးကလည်း ဝတ္ထုရှည်တစ်ခုလောက်နီးပါးရှည်လျားလွန်းနေတာမို့ ကျနော့်ကိုနားနားပြီးရေးခွင့်၊တင်ပြခွင့်ပြုပါနော်) :-)
14 May 2011 9:22 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
၁၂-၀၅-၂၀၁၁ ညဖက်ပေါ့.. ကျနော်ဘာတွေစဉ်းစားနေမိသလဲမသိပါဘူးဗျာ.. အိပ်လို့ကိုမပျော်ဘူး..။
ဒါနဲ့အိပ်ယာကပြန်ထပြီး ကွန်ပြူတာကိုပြန်ဖွင့် ရောက်တက်ရာရာတွေလိုက်ကြည့်နေမိရင်းကနေ....
☻☻ ☻☻ ☻☻ ☻☻ ☻☻ ☻☻
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ နည်းပညာဆိုင်ရာများ0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
11 May 2011 2:38 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
တောင်းပန်ပါတယ်....ခုတလောအပြင်သွားနေတာများနေတော့ စာတွေတောင်မရေးနိုင်ဘူးဗျာ.. သူငယ်ချင်းဘလော့တွေဆီလဲမရောက်ဖြစ်တာနှစ်ရက်လောက်ရှိနေပြီ..ဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်မှာရှိနေတာနဲ့
ကျနော်စဉ်းစားမိသလောက် အချစ်ဆိုတာကို ခံစားမိသလိုချရေးလိုက်ပါတယ်... ရေးချင်တာတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် စာရေးဖို့အချိန်ရယ်၊ရေးဖို့မုဒ်ရယ် (မျက်လုံးအားလဲသိပ်မကောင်းဘူးလေ)
အချိန်ပေးဝင်လာကြပြီး ကျနော်ရေးခဲ့သမျှတွေကို မညီးမညူလာလာဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို လေးလေးစားစားတောင်းပန်ပါရစေနော်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
08 May 2011 7:59 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
T HeM O T H E r D A Y
07 May 2011 12:03 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းတို0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
06 May 2011 11:06 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
''ကိုကြီးအဲလိုပြောမှာစိုးလို့ဘာမှမပြောပဲနေမြဲအတိုင်းနေခဲ့တာကို ကိုကြီးပဲမရမကလိုက်မေးနေတော့..ဒီကပြောလိုက်ရတယ်.. ထင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုကြီးညီမလေးကိုအထင်သေးသွားပြီမို့လား?ဒါကြောင့်အတင်း
♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣
03 May 2011 10:23 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဘွားဘွားဆိုတာကိုတော့ကျနော်မြင်ဖူးလိုက်ပါတယ်.. ဘိုးဘိုးကတော့ကျနော်မမွေးခင်ဆုံးပါးသွားလို့မတွေ့ဖူး လိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ.. သူတို့ကသားစဉ်မြေးဆက်စပါးစိုက်လာခဲ့ကြတဲ့တောင်သူတွေလေ. လယ်ယာမြေတွေအသိမ်းခံရတာကတော့ ကျနော့်ဖေဖေလက်ထက်ကြမှပါ.. ဖေဖေလည်းဒီစိတ်နဲ့ကျနော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုမေမေနဲ့အတူထားပြီး နောင်တမလွန်ခရီးကို ထွက်သွားနှင့်ပြီဗျာ.. ရွှေမြို့သူမေမေကတော့ကျနော်တို့လက်ကိုဆွဲပြီးမြို့ကိုတက်လာခဲ့ရာက မြို့ပေါ်မှာပဲနေဖြစ်တော့တယ်လေ.. ခုတော့မေမေလည်းမရှိတော့တာမို့ အားလုံးကိုဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးပါတယ်....
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ 1 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
02 May 2011 10:12 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
နောက်ပိုင်းကျတော့ သူကသိသိသာသာကို မကျေနပ်ကြောင်းပြလာပါလေရောဗျာ။
သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်ပေါ့၊ ကျနော်ခုလိုလိုက်လိုက်ပို့နေတာကိုသူ့ချစ်သူမြင်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့၊ လိုက်မပို့တော့နဲ့ပေါ့၊ အဲလိုတွေပြောပြောလာတယ်လေဗျာ။ ကျနော်ကလဲ ဘယ်ယုံမလဲဗျာ။
01 May 2011 12:17 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
တစ်ရက်ကြတော့ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ် စိန်ပေါလ်ကားမှတ်တိုင်ကနေပြီး လိုင်းကားစီးလို့ တာမွေကိုအသွားကျနော်စီးလိုက်တဲ့ကားပေါ်ကိုမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူလေ....
''မိုးလေးပေါ့'.. တတ်လာတယ်ဗျာ~ ကိုယ်စီးထားတဲ့ဘတ်စ်ကားကိုရော တလောကလုံးကိုပါမေ့ပြီး ကျနော်မမြင်ရတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ချစ်ဦးသူ မိုးလေးကို ငေးကြည့်ရင်းက ဘယ်လိုကဘယ်လို
သူ့အနားကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင် မြန်ဆန်စွာပဲ နားနားကပ်ပြီးထိုင်လိုက်မိသွားတယ်ဗျာ။
30 April 2011 1:41 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
လူ တစ်ယောက်သည်လဘ္ဖက်ရည်သောက်ချင်လာသဖြင့်မိမိအိမ်တွင်ပင်ဖျော်သောက်မည်ဆိုပါက မီးမွှေးရမည်၊ ရေနွေးအိုးတည်ရမည်၊
29 April 2011 7:23 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
အရင်ကတော့ကဗျာဆိုတာကို ဒီလိုမျိုးကော်ပီလုပ်ပြီးပြန်ရေးလေ့မရှိပါဘူး. မနေ့ညကအိပ်ခါနီးဖတ်လိုက်ရတဲ့စာရေးဆရာမင်းခိုက်စိုးစန်ရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ အောက်မှာကျနော်ရေးတင်ထားတဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြီး (ကလေးဘဝကစလို့နောင်တမလွန်အထိ) ကျနော်တို့လူ့ဘဝထဲမှာနေကြတဲ့သူတိုင်းရဲ့ အလိုမပြည့်ခြင်းတွေကိုထင်ဟပ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆမိလို့၊ နောက်ပြီးတော့အဲဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့စဉ်းစားစရာတွေ၊တွေးစရာတွေဖြစ်လာလို့ ကျနော့်သဘောနဲ့ကျနော်ပြန်ကူးရေးပြီးတင်လိုက်တာပါ...
♦♦♦♦♦ ♣♣♣♣♣ ♠♠♠♠♠ ••••• ♠♠♠♠♠ ♣♣♣♣♣ ♦♦♦♦♦
6:57 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ခဏလေးကြာတော့မိုးက သူတို့အခန်းရဲ့ ဝရန်တာမှာပေါ်လာပြီး ဖုန်းဆက်ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပြလာတယ်လေ... ဒါနဲ့ပဲ ချစ်အဖြေရပြီကွာ ဆိုပြီး လေတွေပါတွေချွန်၊
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အပိုင်တွက်၊ရင်ကိုကော့၊မာန်ကိုမြှင့်ပြီး (သမိုင်းစာအုပ်ထဲကမွန်သူရဲကောင်းသမိန်ဗရမ်း၊တိုင်းတပါးသားဂါမဏိကိုစီးချင်းထိုးအနိုင်ယူပြီး ပြိုင်ပွဲကွင်းတစ်ပတ်ကြော့ကြော့လေးမြင်းစီးပြနေတဲ့ပုံစံလေးကိုတောင်မြင်မိတယ်၊မဆီမဆိုင်ပေါ့)
28 April 2011 7:46 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော်ဒီအရွယ်ထိကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို နှုတ်ဆက်ကြည့်လေးကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ပြတင်းဖက်မှထိုင်ခုံကိုယူလိုက်ကာ departure hall ထဲမှတဆင့်
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သိမ့်ကနဲ ခါသွားတာနှင့်အတူလေယာဉ်ကြီးမှာ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှတဆင့် .....
27 April 2011 11:20 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒါနဲ့နှစ်ပါတ်ကြာသွားတယ်ပေါ့ဗျာ... သူငယ်ချင်းတွေဆီကယူသုံးရမှာအားနာလို့ သူတို့စက်တွေလည်းယူမသုံးဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့..ကိုယ့်ဘလော့လေးကို လွမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်လာဖို့ကြိုးစားရင်းဒီနေ့နှစ်ပါတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ရောက်လာပါပြီ..။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာရောက်တော့မှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ..
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကြေငြာချက်0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
09 April 2011 12:21 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ကျနော့်မှာအရာရာကို ကပ်သီးကပ်သပ်တွေးပြီး စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မြင်တတ်လွန်းတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ကျနော်မူလတန်းကနေ အထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အထိအတူတူလက်တွဲပြီးတက်ခဲ့ကြတာလေ.. ဒီတော့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တော့တော်တော်ချစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ....
06 April 2011 12:11 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရလို့ သူ့ကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ရော၊ မြန်မာလူငယ်တွေကိုအားပေးတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး
သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုပါ ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ သူဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာလက်ရာအချို့ကို
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါ 1 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
05 April 2011 8:57 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီပို့စ်ကိုပြန်ရေးရတာကတော့လောကကြီးမှာအမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးချင့်ချိန်မှု့ရှိလား၊ အမျိုးသားတွေက ပိုပြီးချင့်ချိန်မှု့ရှိလားဆိုတာစဉ်းစားမိလို့ပါ။ အပုပ်ချလိုတဲ့ဆန္ဒမပါပဲ သဘောရိုး၊စေတနာရိုးနဲ့ အရာရာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပြီး တဖက်သားကိုနားလည်မှု့ပေးတတ်စေဖို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်သတိထားမိစေဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးနဲ့အတူ ကျနော်လည်းကျနော်ပြုလိုက်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောညီထွေအောင်နေသွားကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ခုနေနေတဲ့ မြေကမ္ဘာပေါ်မှာ ပိုပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေလို့ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊အမျိုးသမီးဖြစ်စေ မျှမျှတတနားလည်မှု့လေးတွေတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့၊ မှားတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်......အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ....
03 April 2011 12:20 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ခုတလောအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ ကားစီးရင်မိနစ်သုံးဆယ်လောက်ပဲဝေးတဲ့ ကျနော်နေတဲ့အိမ်ကိုတောင်ပြန်မရောက်တာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလေ။ ဒီနေ့မှအိမ်ပြန်ဖို့ အခွင့်အရေးရလာတာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မိတယ်။ ကျနော့်အလုပ်ထုံးစံအတိုင်း ဖုံးကိုလဲအလုပ်ကိစ္စကလွဲပြီးမဆက်ဖြစ်တော့ အိမ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလဲမသိရဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်မှ မမကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ရင်ဘက်ကိုဆောင့်ပြီးတွန်းလိုက်သလိုခံစားရပါတယ်။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ2ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
25 March 2011 11:07 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဂျပန်ငလျှင်ကြောင့်စိတ်တထင့်ထင့်ဖြစ်နေတုန်းမထင်မှတ်ပဲမြန်မာပြည်မှာမနေ့ညက လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျှင်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားရတယ်ဗျာ။အဲဒီငလျှင်ကြောင့် တာချီလိတ်မြို့နှင့် မိုင် ၂၀ ခန့်ဝေးကွာတဲ့ တာလေမြို့နယ်မှာငလျှင်ဒဏ်အဆိုးဆုံး ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပဲဗျ။ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု့နှင့် လူအသေပျောက်ကိုတော့စုံစမ်းဆဲလို့ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ပြောသွားတယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ခုထိတော့အတိအကျသိရသေးပါဘူးလို့ဆိုရမှာ
ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသလို သူငယ်ချင်းများလဲထပ်တူခံစားနေကြမယ်လို့
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ သဘာဝဘေးမှတ်တမ်းများ0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်